Wararka ugu xiisaha badan Caawa ee Soomaaliya | Dayniiile.com-Latest news from around the world
Home Warkii Wararka ugu xiisaha badan Caawa ee Soomaaliya
[Madaxweynaha koofur Galbeed somaliya Cabdi Casiis lafta Gareen wuxuu Dib ugu laabtey magaalada Baydhabo.
iyadoo wali ay ku sugan yihiin magaalada dhuusamareeb Madaxda Dowlad Goboleedyada Puntland jubbaland Galmudug iyo hirshabeelle.
Madaxweynaha koofur Galbeed somaliya Abdiaziiz lafta Gareen oo lagu Tiriyo dhanka madaxweyne farmaajo ayaa magaalada dhuusamareeb isaga Tagey kaddib markuu Diidey inuu Saxiixo warmurtiyeed uu ku Qornaa Gudoomiyaha Baarlamaanka somaliya Mohamed mursal sheikh Abdirahmaan inuu Noqonaayo kusimaha madaxweynaha somaliya maadaama madaxweyne farmaajo wakhtigiisa dhamaadey ,
Abdiaziiz lafta Gareen iyo Mohamed mursal sheikh Abdirahmaan waxaa ka dhexeeya dagaal dhanka Doorashada somaliya.
Dhinaca kale Puntland ayaa ku dhawaaqday in caawa 12 haneenimo kadib 8. Feb. 2021 in aysan Madaxweyne u aqoon saneyn Maxamed Cabdullahi Farmajo.
waxaan la ogeyn in Lafta gareen uu ku laaban doono dhuusamareeb, si uu uga qaybgalo xaflada sanad guurada madaxeyne Qoorqoor.
Iyo war kale
[07/02, 19:28] Nadaaro: Warar goordhaw soo dhacay ayaa sheeaya in Madaxweynayaashii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh iyo Sheekh Shariif inay xilligan ku sugan yihiin Hoyga Cali Mahdi, iyadoo halkaas ay shir albaabada u xiran kula leeyihiin.
Dad Goobjoogayaal ah ayaa sheegaya inay arkayeen Madaxweynayaashii hore oo ay galbinayaan illaa sodameeyo kolonyo isugu jirtay gaadiidka dagaalka iyo kuwa aan xabadaha karin oo kaga yimid dhanka hoyga ay degan yihiin oo ku yaalla Garoonka diyaaradaha.
Dhaq dhaqaaqan ayaa u muuqda inuu yahay mid dhoolatus, iyadoo muddo saacado ah ay ka harsan tahay muddo xileedki sharciga ahaa ee Madaxweyne Farmaajo.
Previous articleTaliyaha Ciidanka Nabadsugida Dhuusamareeb ee C/rashiid oo goor dhawayd ku dhintay qarax lala eegtay gaari uu saarnaa duleedka magaalada Dhuusamareeb.
Next articleShacqbkq Muqdisho oo wal wla dareemay